TOP NEWS: Amisom oo Beenisay in Daacish ay Weerar ku qaaday Ciidamada Amisom ee Muqdisho Jooga – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Amisom oo Beenisay in Daacish ay Weerar ku qaaday Ciidamada Amisom ee Muqdisho Jooga
by admin 26th April 2016 039
Taliska Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in uu jiray isku day weerar oo ka dhacay Deegaanka Tareedisho, oo qiyaastii 13km u jirta Magaalada Muqdisho, balse aanu waxyeelo weerarkaasi ka soo gaarin Amisom.
Ururka Daacish, ayaa Shalay Galinkii Danbe sheegtay in weerrarkii ugu horeeyay oo ay ka gaysteen dalka Somaliya, ay ku burburiyeen mid ka mid ah kolonyada Ciidanka Amisom.
Korneyl Joe Kibet, Afhayeenka Ciidanka Amisom, ayaa sheegay in Shalay uu jiray qarax ka dhacay Deegaanka Tareedisho, hase ahaatee uu qaraxaasi dhacay, xilli ay goob isgoys ihi ka gudbeen gaadiidka Amisom.
“Waxaa jiray isku day weerar saacaddu markay ahayd 11:00 illaa 11:15 barqanimo ee shalay lagu qaaday mid ka mid ah kolonyadeena oo ka gudbeysay meel isgoys ah oo 13 u jirta Muqdisho, markii ay isgoyska dhaafeen ayaa qarax dhacay, waxayna isku dayeen in baabuurta ay la eegtaan qarax miino, balse waxay qaraxday miinadu, xilli ay kolonyadu dhaaftay.
“Argagaxisadani wax kasta way iska sheegtaan, qof walba ayaa iska sheegan kara inuu yahay Daacish, illaa iyo hadda anagu maanan arag wax cadayn kara arrintan, iskumana dhicin Daacish, Mana aaminsani inay Daacish tahay.” Ayuu yiri Joe Kibet.
Korneyl Kibet, ayaa xusay in weerarkani uu u maleynaayo inay gaysteen garab ka mid ah Xoogaga Ururka Al Shabaab, isla-markaana aanu kala cadayn karin joogitaanka Daacish ee goobaha ku dhow dhow Caasimadda.
“Waxay ila tahay inay gaysteen mid ka mid ah unugyada Al Shabaab oo sheeganaaya inay yihiin Daacish, kamase warqabo joogitaanka Daacish ee agagaaraha Magaalada Muqdisho.” Ayuu sii raaciyay Kibet.
Weerarkan, ayaa wuxuu noqonayaa in markii ugu horeysay Ururka Daacish lagu maqlo agagaaraha Magaalada Muqdisho.
DEG DEG: Kooxo Hubeysan oo Nin Ganacsade ah ku dilay dagmada Dharkenley
Hadda: Maxaadan ogeyn oo ka cusub dagaaladii Dacdheer (War Ayaan Idin kaga Wadnaa)
Top News: Dibadbax lagu taagerayo Madaxweyne Xassan hadda Muqdisho ka socda, iyo cida soo qabaqaabisey oo la ogaadey
Duqa Caasimadda oo dib-u-habeyn ku sameeyey Guddiga Xallinta Khilaafaadka Dhulka iyo Guryaha ee G/Banaadir